Mety Ho Avotry Ny ‘Big Data’ Ve Ireo Tigra Mpiriorio Sisa Any India ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2015 17:59 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Nederlands, Deutsch, Français, русский, 繁體中文, Italiano, English
Amin'ny fandalinana ireo fandinihana 25.000 nataon'ny tsirairay dia mahita hirika hisamborana ireo mpihaza tigra antsokosoko amin'ny làlany ny mpiaro ireo biby mpiriorio. Sary avy amin'i “The Belurs”, mpampiasa Filckr CC-BY-NC-SA 2.0
Tao amin'ny Ensia.com, gazetiboky izay manasongadina ny vahaolana iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao no namoahana voalohany ity lahatsoratra nataon'i Roger Drouin ity, ary avoaka eto indray araka ny fifanarahana amin'ny fifampizaràna votoaty.
Mivondrona ho andiany vitsy mivezivezy miaraka amin'ny antsy, famaky, fandrika vita amin'ny vifotsy ireo mpihaza tigra antsokosoko any India, efa hatry ny ela ry zareo no nahazo tombony raha oharina amin'ireo manandrana miaro ity karazana sakabe ity. Isaky ny roa na telo taona ry zareo no miverina amin'ny toerana izay fantany “ny renirano sy ny harambato rehetra”, ary mamelatra ny fandrika amin'ny làlana fandehanan'ny tigra na manakaiky ny toerana fisotroana rano ireo mpihaza antsokosoko satria entanin'ny fitadiavan'i Shina taolana tigra ampiasaina amin'ny fanaovana fanafody nentim-paharazana, hoy i Belinda Wright, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Fikambanana Fiarovana ny Biby Mpiriorio any India. Mahalana no ahasamborana azy ireo.
“Tsy mampino ny fahaizan-dry zareo sy ny fahafehezany ny ala ,” hoy i Wright. “Ampiasainy avokoa izay paikady rehetra hitany ao anaty boky.”
Saingy fikarohana iray nataon'i Wright, ekolojista Koustubh Sharma sy ny namany izay nivoaka tamin'ny volana Aogositra lasa teo no meyho afaka hanampy amin'ny fanamdihana ny rasa ho amin'ireo mpihaza tigra antsokosoko any India. India izay toerana iriariavan'ny maherin'ny antsasak'ireo tigra mpiriorio maneran-tany.
Nampihatra paikady vaovao mba haminavinana izay mety hitrangàna sy hahitàna ny famonoana tigra any amin'ny faritra maro any India ilay fikarohana navoaka tamin'ny gazetiboky Biological Conservation, ary avy eo nampiasa azy io mba hahalalàna ireo “toerana mafàna” 73 fototra izay tena mety ahitana ny fihazàna tigra antsokosoko sy ny fanaovana varomaizina ireo ampahany amin'ny tigra. Araka ny voalazan'ny mpanoratra dia mety hampahomby kokoa ny ady atao amin'ny fihazàna antsokosoko izany amin'ny fanomezana ireo mpandala ny tontolo iainana, ny tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny lalàna ary ireo mpiambina ny ala miezaka miaro ireo tigra, ny fahafahana mitoetra any amin'ny toerana izay ilàna fifehezana bebe kokoa sy fanatsarana ny fanavotana ireo biby nasionaly Indiana ahiana ho lany taranaka.
Tao anatin'ny taona vitsy lasa, nanoratra famantarana informatika sy nandalina teboka 25.000 tanaty angon-drakitra – nangonina tany aminà distrika 605 hatramin'ny 1972- momba ny famonoana antsokosoko ireo biby mpiriorio i Sharma, mpandala tontolo iainana malaza avy ao an-toerana, niaraka tamin'ny Snow Leopard Trust sy ireo mpahay siansa niaraka tamin'ny Nature Conservation Foundation ary ny ekipany. Ao anatin'izany ireo toerana azo antoka fa misy fihazàna tigra antsokosoko sy ny toerana nahatratrarana ampahanà tigra. “Maro loatra ilay angona ka mandany 20 ka hatramin'ny 25 isaky ny modely aho isaky ny hanokatra tsingerim-panadihadiana”,hoy i Sharma.
“Ny tambajotram-panangonam-baovao no dingana tena mavesa-danja amin'ny ady atao amin'ny famonoana tigra sy ireo biby mpiriorio” hoy i Wright. Ny fahazoana vaovao betsaka dia midika ho fahaizana mametraka tsara ireo mpanangom-baovao any an-toerana sy fahaizana mipaingotra antso amin'ny finday. Midika ihany koa ho fahaizana mametraka ireo andiany mpisafo eny an-kianja sy ny asan’ ireo mpiambina ala izany. Fa ny tena zava-dehibe hoy i Sharma dia ny fahafantarana ny toerana nisy fiovàn'ny fanaovana ilay heloka bevava, satria niova ny paikan'ireo mpihaza antsokosoko. Izany no nahatonga ireo mpikaroaka nanangana modely azo havaozina matetika.
“Rehefa hariva, tsy maintsy miezaka ny misongona ireo mpanao heloka izahay ” hoy i Sharma. ” Izany no ataon'ireny orinasam-piantohana sy banky ireny. Manao lasitra ry zareo ary manangana tetikasa, dia mamatsy vola. Toy izany koa no ataonay. Manana lasitra sy tetikasa izahay, ary dia tsy maintsy mamatsy vola mifanaraka amin'izany.”
Ireo toerana mafana famonoana tigra amin'izao fotoana izao voatilin'ilay fanadihadiana dia ahitana faritra sasantsasany izay nanaitra ireo mpikaroka ary mety hahazo tombony amin'ny fampiharana hentitra ny lalàna. Ohatra, taloha dia namaivanina kokoa ny fampiharana ny lalàna amin'ny sisintany mampisaraka an'i Nepal sy India raha oharina amin'ny faritra hafa, hoy i Sharma. Asongadin'ilay fikarohana fa teren'ny firongatry ny fihazàna antsokosoko ilay faritra, angamba noho ny fitombon'ny isan'ny tigra ao an-toerana sy amin'ny maha-toerana fanaovana varomaizina taolanà tigra mankany Shina hoy i Sharma. “Faritra izay asongadinay ho toy ny toerana mahamay io ka tokony handraisan'ny mpanao politika andraikitra” hoy i Sharma.
Efa misintona sahady ny sain'ireo tompon'andraikitra amin'ny fisorohana ny fihazana antsokosoko manerana an'i India ireo raikipohy nampiasaina hikajiana ny toerana mahamay sy miovaova amin'izao fotoana izao. Io fandalinana io ihany koa no nahita porofo fa aleon'ireo mpihaza antsokosoko mampiasa ny fiarandalam-by satria moramora kokoa ho azy ireo ny fahafahany miafina any anivon'ireo mpandeha an-tapitrisa isan'andro. Fara-fahakeliny distrika 17 lavitra ny ala-nà tigra, ao anatin'izany i Delhi sy Indore, no ahitana taham-pahafatesana tigra betsaka satria ivon-toeram-pivarotana izy ireo.
Efa misintona sahady ny sain'ireo tompon'andraikitra amin'ny fisorohana ny fihazana antsokosoko manerana an'i India ireo raikipohy nampiasaina hikajiana ny toerana mahamay sy miovaova amin'izao fotoana izao. Tamin'ny Septambra, dia nanao fanairana an-tsoratra an'i Rajesh Gopal, sektretera mpikambana ao amin'ny National Tiger Conservation Authority of India ( Fahefana Nasionaly momba ny fiarovana ny Tigraa ao India) i Sharma, izay nanolotra ireo vokatra ho an'ireo tompon'andraikitra eny an-kianja misahana ny fanaraha-maso ireo tigra mpiriorio sy ny ady atao amin'ny mpihaza antsokosoko any amin'ny toerana fonenan'ny tigra sy ireo faritra arovana. Tsapan'i Sharma fa azo ampiharina amin'ny ady atao amin'ny fihazàna antsokosoko ireo karazam-biby hafa, manomboka any amin'ny leoparda ka hatramin'ny ‘pangolin’ ity fomba ity raha ampiarahana amin'ny fampiharana any an-kianja.
“Teknolojia tsara sy fampiharana tsara any an-kianja no ilaintsika,” hoy i Wright.” Tsy misy mahasolo ny olona misy tongotra roa, tànana roa ary atidoha.”
Mpanao gazety tsy miankina sy mpanoratra manokana momba ny tontolo iainana i Robert Drouin. Mandrakotra ny fiarovana ireo karazana manomboka amin'ny ramanavy ka hatramin'ny leoparda miaina anaty ranomandry ary ny resaka momba ny angovo izy. Ny Scientific American, Yale Environment 360, Mother Jones ary ny Grist.org no ahitana ny sangan'asany. Eto izy no mitoraka bilaogy sy mibitsika avy amin'ny @rogerreal.